Nezvedu - Shenzhen Roman Technology Co., Ltd.
Yakavambwa muna 2008, Shenzhen Roman Technology Co., Ltd. ibhizimusi renyika repamusoro-soro uye rimwe remakambani ekuChina ane hunyanzvi.Kweanopfuura makore gumi, nekunangana nezve "dhizaini yekugadzira, R&D, uye chaiyo kugadzira", Roman anga achienderera mberi achinatsiridza indasitiri yeindasitiri cheni, ichiwedzera simba rayo reR&D, kusimbisa hunyanzvi hwekugadzira, uye kukura kuita mutungamiri muChina's Bluetooth headset indasitiri.
Smart Factory & Smart Manufacturing
Fekitori yeRoma yakangwara muShenzhen ine mwedzi wega wega kugadzira inodarika miriyoni imwe.Roman yakavaka yepamusoro uye yakazvimirira acoustic laboratory uye chigadzirwa R&D Institute kuti irambe ichikwirisa uye kuwedzera simba rekugadzira rekambani.Roman ikozvino ine mwedzi wega wega kugadzirwa kwemayuniti anopfuura miriyoni imwe.
In-Deep Ongororo yeTechnologies & Inoenderera R&D.
Roman ane anopfuura mazana maviri nemakumi mana epakati patents uye ekutanga patents muindastiri, uye ane kuwedzera kwepagore kweanopfuura makumi matatu patents.
Yekutanga-Kirasi & Yepasi-Inozivikanwa Hunhu
Roman yakapasa nhevedzano yezvitupa zvepasirese, zvinosanganisira IS09001, CE, ROHS, uye FCC.Roman yakazvimiririra yakagadzira anopfuura zana eBluetooth mahedhifoni, uye zvigadzirwa zvayo zvinotengeswa kunyika dzinopfuura makumi mashanu nematunhu muEurope, America, South America, uye Southeast Asia.Zvakare, Roman anga achishandira pamwe neakawanda anozivikanwa mabhureki muChina seOEM, ODM, kana brand agency kuti uwane mibairo yekuhwina.
Misa kambani uye yakatsunga kuisa pakati peR&D nekugadzira zvigadzirwa zveBluetooth headset.
Yakawana kukura kwegore negore kwe400%.
Misa dhipatimendi rebhizinesi rekunze kusimudzira bhizinesi reOEM neODM pasi rese.
Yakapasa yemhando yekusimbisa system certification, inosanganisira ISO9001, CE, ROHS, uye FCC.
Akapasa WalMart fekitori odhisheni uye akave akakosha mubatsiri weWalMart muChina.
Yakatangisa mahedhifoni ekutanga ane Bluetooth 4.0 chip, nekutengesa kwepagore kurova makumi emamiriyoni pasi rese.
Yakagadzira inyanzvi isina waya yekuteerera indasitiri ecological cheni, uye yakapihwa "National High-tech Enterprise" uye "Pamusoro zana Mabhizinesi Madiki uye Epakati-saizi".
Yakazadzikiswa shanduko yekambani, uye yakagadziridzwa mhando yechigadzirwa ichiwedzera huwandu uye ichisimudzira chaiyo kugadzira.
Yakagadzirwa kuyambuka-muganho e-commerce nzira, uye yakawana kukura kwakakura kupesana nekumira kwechinyakare kugadzira.
Yakashandurwa kubva kumugadziri weChinese akangwara kuenda mugadziri weChinese akangwara, uye akavaka fekitori yakangwara.
Yakagadzira nzira yekukurudzira yekugovana-kubata nevashandi vese vekambani kuunganidza matarenda ekupedzisira muindastiri uye kuunganidza kukwikwidza kwepakati.
Yakagadzirisa chimiro chekambani, uye yakagadziridza mhando yechigadzirwa uye masevhisi kuti uwane yakadzama kubatana nevatengi kuhwina-kuhwina mhinduro.
Yakaunza musika uye mushandisi hombe data ongororo yekusimudzira ruzivo rwekambani uye otomatiki kuvaka.
Noise Kanzura Earbuds, Wireless Bluetooth Earphone, Bluetooth Mono Headset, Munzeve Earphone, Inobata Bluetooth 5.0 Earbuds, Bluetooth Headset Ine Mic,